01/12/2014:Content Maketing : Facebook business Page would have beenagood response
Home > News-Dec 2014 to july 2015 > 01/12/2014:Content Maketing : Facebook business Page would have beenagood response
၀ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်မှာတင်တဲ့ပုံတွေက အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး ထိရောက်တဲ့ အချက်အလက်တွေကိုဖော်ပြပေးနိုင်တဲ့ပုံတွေ ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
ဓါတ်ပုံတွေဟာ အသုံးပြုသူများကို စိတ်ဝင်စားအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ အရာဖြစ်ပြီး ယနေ့မှာတော့ ဓါတ်ပုံတွေကို ဘယ်လို edit လုပ်ရမယ် ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးလှပတဲ့ပုံတွေ ကိုဘယ်လိုရှာဖွေရမယ် ဆိုတာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အခက်တွေ့နေကြပါတယ်။
ReadyPlanet Myanmar နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ၀ဘ်ဆိုဒ်များက ပုံတင်ခြင်း edit လုပ်ရလွယ်ကူခြင်းကြောင့် လှပတဲ့ ပုံများရှိထားပါက အလွယ်တကူမိမိဝဘ်ဆိုဒ်ကို အလှဆင်နိုင်ပါတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာများက Content Marketing ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ Buffer ရဲ့ Courtney Seiter မှ ဖော်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းဟာ Buffer Blog မှ သတင်းအချက်အလက်များ နှင့် ပြန်လည် comment ပေးချက်များကို စုဆောင်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
ယနေ့မှာတော့ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ဓါတ်ပုံများ ကို အခမဲ့ ဒေါင်းလော့ရယူဖို့အတွက် ဖော်ပြ ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဓါတ်ပုံပေါင်း ၂၈၀၀၀၀ ကျော် ဒေါင်းလော့ ရယူနိုင်ပါတယ်။
ဒီ ၀ဘ်ဆိုဒ်မှာလည်း ဓါတ်ပုံအများအပြားရှိပြီး ပုံဆိုဒ် အသေးဆို အခမဲ့ ရယူနိုင်ကာ attribution မပါဖို့နှင့် အခြားအရွယ်အစားများအတွက် credit ပေးရပါတယ်။
ဖော်ပြပါဝဘ်ဆိုဒ်များမှလှပသောပုံများရယူပြီး သင့်ဝဘ်ဆိုဒ် ဘန်နာများ ၊ နောက်ခံ ဘက်ဂရောင်းများ နှင့် content နေရာများတွင် ထည့်ကာ ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ၀ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုချင်းစီမှာ မတူညီတဲ့ စည်းကမ်းချက်များရှိသဖြင့် ပုံများကို ဒေါင်းလော့မလုပ်မီ အဆိုပါ စည်းကမ်းချက်များကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရှိအောင် အချိန်ပေးဖတ်ရှုသင့်ပါတယ်။
4. Do not post messages on the other business page and asking to like your page.
5. Do not post about complain or emotion on your business page because it will make unreliable page.
6. Use humor to reply. Make friendly with the customer in every reply message.
7. Do not copy other people's pages fainter. Used as its own
8. Business page should not post (comments) about religion and politics.
9. Do not promote their own proposals into the other people's business page (Or competitors page)
That's your Facebook business Page would have beenagood response from the fans and customers want to use the service with you.